အဆိုပါ NEETs ၏ Osomatsu-san က Hesokuri စစ်ပွဲများ ~ တိုက်ပွဲ ~ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆိုပါ NEETs ၏ Osomatsu-san က Hesokuri စစ်ပွဲများ ~ တိုက်ပွဲ ~
Osomatsu-san ကအဆိုပါ NEETs ၏ Hesokuri စစ်ပွဲများ ~ တိုက်ပွဲ ~ APK ကို
တစ်ဦးတည်းဂျပန်တွင်သန်း2ကျော် downloads, အတူ "Osomatsu အဘိဓါန် San" စီးရီးများအတွက်တရားဝင်စမတ်ဖုန်းဂိမ်း,!
အဆိုပါ sextuplets ရန်သူများကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ငွေသားများလူတိုင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် stash ခိုးယူဖို့သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဝတ်စုံအမျိုးမျိုးထွက်ခေါင်း! gags, Over-the-ထိပ်တန်းအရေးယူမှုနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီတိုက်ပွဲ၏အပြည့်အဝ!
မိုဃ်းကောင်းကင်၌ပျံတတ်သောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူယခုတိုက်ပွဲများ ပို. ပင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လာလေပြီတကား
■အားလုံးသည်သင့်အကြိုက်ဆုံး Matsus စုဆောင်း!
မသာသင် anime ထဲကနေအပေါငျးတို့သဝတ်စုံစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်ရုံဂိမ်းဖန်တီးအသစ်စက်စက်မူရင်းတစ်ဦးချင်းစီဝတ်စုံအများကြီးရှိပါတယ်! သင်တို့သည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားဇာတ်ကောင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲအများကြီးတွေ့နိုင်ပါသည်။
တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါထွက်မဟာမိတ်များ Send, သူတို့ထိုအရပ်မှအားလုံးအမှုကိုစောင့်ကြည့်!
အရင် Matsuno မူလစာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်ရန်သူခံတပ်ဆင်း crashing ဘယ်ရောက်လိမ့်မည်လော သင်ပင်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုမလိုအပ်ပါဘူး! သငျသညျလုံးဝသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်!
ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ Back ကိုတဖန်စွန်းတိုင်အောင်■!
Chase Iyami, Hatabo, Dekapan, Dayoon, Totoko နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှဖြတ်ပြီးအခြားသူတွေနဲ့စစ်တိုက်လုပ်ပေး! သငျသညျကိုသှားအဖြစ်ရှုခင်းနှင့်သင်၏ရန်သူများကို '' ကွဲပြားခြားနားသောပြည်တွင်းဖြစ်မှုတ်သွင်းဝတ်စုံပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်အိမ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တလျှောက်လာနိုငျအခါ, တစ်ဦး NEET ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားနိုင်ပါတယ်!
စီမံကိန်း / ထုတ်လုပ်ခြင်း
Avex ရုပ်ပုံများ Inc က
DLE Inc က
Active ကိုဂိမ်းမီဒီယာ Inc က
Monstar Lab က, Inc
© Fujio Akatsuka / Mr.Osomatsu-စီမံကိန်း
■အကြံပြု OS ကို
နောက်ပိုင်းတွင်ကို Android 4.1 သို့မဟုတ်
အဆိုပါ NEETs ၏ Osomatsu-san က Hesokuri စစ်ပွဲများ ~ တိုက်ပွဲ ~
50.84 ကို MB
avex ဓာတ်ပုံများကို Inc က